Carl Henry Global - Fepetra fampiasana
Raha tsy manaiky ny fampiharana ny fampiasana ianao, dia atsahatra tsy mampiasa ny tranokala avy hatrany!
Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity, dia manondro ny fanekena sy ny fifanarahana amin'ny fampiasana ity fampiasana ity ianao. Raha tsy manaiky ny fampiharana ireo fampiasana ianao dia aza mampiasa ilay tranonkala.
Famerana ny fampiasana fitaovana
Ireo fitaovana ao amin'ity tranonkala ity dia voarakitra an-tserasera ary ny zo rehetra voatokana. Ny soratra, ny sary, ny tahiry, ny code HTML, ary ny fananana ara-tsaina hafa dia arovan'ny Lalàna ara-tsosialy Anglisy sy Iraisam-pirenena, ary mety tsy azo kopia, averimberina, navoaka, novaina, nadika, nampiantranoina, na nizara amin'ny fomba hafa tsy misy fahazoan-dàlana. Ny marika rehetra eto amin'ity tranonkala ity dia mari-pamantarana marika an'ny CarlHenryGlobal.com na ireo tompony hafa nampiasaina niaraka tamin'ny fanomezan-dàlany.
Database Ownership, Licence, ary Fampiasana
Manamafy ny CarlHenryGlobal.com, ary manaiky ianao fa ny CarlHenryGlobal.com no tompon'ny copyright an'ny Databases of Links amin'ny lahatsoratra sy loharanom-pejy izay azo alaina amin'ny http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com sy ny mpandray anjara dia miaro ny zo rehetra ary tsy manan-jo amin'ny fananana ara-tsaina no omena amin'ity fifanarahana ity.
CarlHenryGlobal.com dia manome anao lisansy tsy ekena, tsy azo avadika ho ampiasaina ny anaran-drakitra izay azonao ampiasaina miaraka amin'ireo fepetra sy fepetra ireo. Ny tahiry (s) dia azo ampiasaina raha tsy mijery ny fampahalalana na fanafangoana vaovao araka ny voalaza etsy ambany.
Manaiky ianao raha mampiasa fampahalalana azo avy amin'ny angon-drakitra CarlHenryGlobal.com dia ho an'ny fampiasana manokana anao manokana na ny tanjona anatiny ao an-tranonao na ny orinasanao, raha tsy izany no fivarotana na fanaovana fofom-baovao, ary tsy misy antony na fahazoan-dàlana hamoahana azy, atao pirinty. , alaina, alefaso, fizarana, famerenana indray, na averina amin'ny endriny rehetra ao anaty tahirin-kevitra (na mivantana na amin'ny alàlan'ny fandefasana, voafantina na famafazana) na ho famerenana indray, famerenana indray, famerenana indray, fijerena na raha tsy izany.
Na izany aza, dia mety maka fotoana be loatra ianao maimaim-poana na manonta pejy manokana izay nofantenina tsirairay, mba hahazoana manokana ny filazana manokana izay ampiasaina amin'ny fampiasanao manokana, na ampiasaina ao amin'ny orinasanao irery ihany, amin'ny tsiambaratelo. Azonao atao ny manisy dika mitovy ho an'ny diplaomatika, na amin'ny endrika maodilim-piteny na sarimihetsika matanjaka, izay mety ho azo ekena amin'ny antony ihany. Tsy misy na inona na inona eto dia hanome alalana anao hamorona tahirin-kevitra, lahatahiry na famoahana dika mitovy na avy amin'ny tahiry, na amin'ny fizarana na fampiasana ivelany.
Ireo fitaovana eto amin'ity tranokala ity dia nomena "tahaka ny" ary tsy misy fiantohana na karazana atao na izay lazaina. CarlHenryGlobal.com dia mandà ny antoka rehetra, am-bavany na ampiharina, ao anatin'izany, fa tsy voafetra ho, tsy misy fahazoan-dàlana amin'ny vidin'ny varotra sy fahaizan'ny varotra ho an'ny tanjona manokana. CarlHenryGlobal.com dia tsy manome antoka fa ny fiasa ao anatin'ireo fitaovana ireo dia tsy ho voarangotra na tsy misy hadisoana, fa hahitsy ny lesoka, na raha ity tranonkala ity na ilay mpizara mamela azy io dia tsy misy otrikaretina na singa manimba manimba. CarlHenryGlobal.com dia tsy manome antoka na hanao fisolokiana momba ny fampiasana na ny vokatry ny fampiasana ireo fitaovana ato amin'ity tranokala ity raha jerena ny maha-marina azy ireo, ny fahitsiana azy, ny fitokisan'izy ireo na raha tsy izany. Ianao (ary tsy CarlHenryGlobal.com dia mieritreritra ny vola manontolo amin'ny servisy, fanarenana na fanitsiana ilaina. Ny lalàna manan-kery dia mety tsy hamela ny fanesorana ireo fangatahana voalaza, ka noho izany ny fanilihana etsy ambony dia tsy mihatra aminao.
Na inona na inona toe-javatra, anisan'izany, fa tsy voafetra, tsy ekena, dia ho tompon'antoka amin'ny fanimbana manokana na vokatr'izany vokatry ny fampiasana, na ny tsy fahaizana mampiasa ireo fitaovana eto amin'ity tranokala ity ny CarlHenryGlobal.com na ny solontena iray manana fahefana CarlHenryGlobal.com dia nanoro hevitra ny mety hisian'izany fahavoazana izany. Ny lalàna azo ampiharina dia mety tsy hamela ny fetra na ny fanilihana andraikitra na fahavoazana na fahavoazana azo avy aminy, noho izany ny fetra etsy ambony na ny fivoahana etsy ambony dia tsy mihatra aminao. Tsy misy na inona na inona tokony hitrangan'i CarlHenryGlobal.com tanteraka aminao noho ny fahasimbana rehetra, ny fatiantoka ary ny antony anaovana zavatra (na amin'ny fifanarahana, ny fampijaliana, tafiditra ao fa tsy voafetra, tsy miraharaha na tsia) mihoatra ny vola naloanao, raha misy, noho ny fidirana. ity tranonkala ity.
Ny zava-misy sy ny fampahalalana ao amin'ity tranonkala ity dia heverina ho marina amin'ny fotoana napetrak'izy ireo tao amin'ny tranonkala. Azo atao ny fanovana na oviana na oviana tsy misy fampandrenesana. Ny tahirin-kevitra rehetra atolotra ato amin'ity tranonkala ity dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny tanjona fampahalalana fotsiny. Ny vaovao voaray ao amin'ity tranonkala sy pejy ity dia tsy natao hanome torohevitra ara-dalàna, ara-bola na ara-bola, na toro-hevitra hafa, na inona na inona, na iza na iza na orinasa ary tsy tokony hiantehitra amin'io lafiny io. Ireo serivily voatonona ato amin'ity tranonkala ity dia omena amin'ny sehatra izay ahafahana manolotra azy araka ny lalàna. Ny fampahalalana omena ao amin'ny vohikalantsika dia tsy tafiditra manontolo, ary voafetra ny fampahalalana izay natao ho an'ny CarlHenryGlobal.com ary ny fampahalalana toy izany dia tsy tokony hiantehitra amin'ny maha-tafiditra manontolo na marina.
Rohy sy marika
Ny tompon'ity tranokala ity dia tsy voatery hifandray amin'ny tranokala izay mety mifamatotra amin'ity tranokala ity ary tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatiny. Ny tranokala mifandraika dia natao ho an'ny fidiranao fotsiny ary azonao tratran-doza miaraka aminy ianao. Ny rohy mankany amin'ny tranokala hafa na ny momba ny vokatra, serivisy na boky na boky hafa ankoatr'i CarlHenryGlobal.com sy ireo orinasany sy mpiara-miasa aminy amin'ity tranonkala ity dia tsy manondro ny fankatoavana na fankatoavana ireo tranonkala, ireo vokatra, serivisy na boky navoakan'i CarlHenryGlobal.com na ny orinasa sy mpiara-miasa.
Ny anarana sasany, ny sary, ny logos, ny icons, ny design, ny teny, ny lohateny na ny andian-teny eto amin'ity tranonkala ity dia mety ho anaran-tsehatra, marika na marika famantarana ny CarlHenryGlobal.com na ny vondrona hafa. Ny fampisehoana marika ao amin'ity tranonkala ity dia tsy midika fa nomena fahazoan-dàlana avokoa ny karazana. Ny fanodinana rehetra, ny famerenana indray, na ny dika mitovy amin'ny fanovana ny mari-pamantarana sy / na ny votoatiny ao dia mety ho fandikana ny lalàna ara-dalàna iombonana iombonana sy / na lalàna momba ny zon'ny mpamorona ary mety hanaiky ny mpitsikera amin'ny hetsika ara-dalàna.
Tsiambaratelo ny Codes, ny tenimiafina ary ny fampahalalana
Manaiky ianao fa tsy hitanao izay tsy maintsy itiavanao azy sy ny tsiambaratelo izay kaonty Mpanjifa, anarana, ID mpampiasa, na tenimiafina izay azonao avy amin'ny CarlHenryGlobal.com, ary ny fampahalalana rehetra anananao amin'ny alàlan'ireo faritra voaro amin'ny tenimiafina ao amin'ny tranokalan'i CarlHenryGlobal.com. tsy antony na avelany ampitaina, adika na ampitaina amin'ny olon-kafa rehetra ny fampahalalana toy izany.
Raharaha ara-pitsarana hafa
Ireo fampiharana ireo dia ampiharina amin'ny alàlan'ny http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com dia mametraka ny zo hamoaka fanovana amin'ny fampiasana ity fampiasana ity amin'ny alàlan'ny fanontana dikan-dikan-dikan-ity fanavaozana ity amin'ity tranonkala ity: io dikan-teny io dia ampiharina amin'ny fampiasana rehetra anao amin'ny daty famoahana azy. Ny fahafahana miditra amin'ny fampahalalana avy amin'ny CarlHenryGlobal.com dia ho sehatra mivantana sy tsy misy dikany mifototra amin'ny fepetra manaraka.
Ity fepetra fampiasana ity sy ny fahazoan-dàlana omena dia mety tsy ho omena anao na tsy hametraka anao raha tsy efa nisy ny fanekena an-tsoratra mialoha an'i CarlHenryGlobal.com.
Ireo fepetra fampiasana ireo dia fehezin'ny, manamboatra sy mampihatra araka ny lalàna ao amin'ny Londres UK, satria ampiharina amin'ny fifanarahana voarakitra sy ny fepetra tanteraka ao anatin'izany fepetra izany.
Raha oharina amin'ny fomba rehetra nanitsakitsahana anao na nandrahona ny fanitsakitsahana ny CarlHenryGlobal.com sy / na ny zon'ny fananana ara-tsaina ao aminy, CarlHenryGlobal.com ary / na ireo mpiara-miasa aminy dia mety hitady fanamaivanana na fanafanana mety hafa ao amin'ny fitsarana na federaly any amin'ny Fanjakana. any London UK, ary manaiky ny fanjanahana manokana sy ny toerana any amin'ireo fitsarana ireo ianao.
Izay mety ho fifandirana hafa dia ho tapa-kevitra toy izao manaraka izao:
Raha misy fifanolanana mifanaraka amin'ity fifanarahana ity, dia manaiky isika aloha ny manapa-kevitra amin'ny alàlan'ny mpanelanelana iraisam-pirenena mifototra amin'ity toerana ity: London UK. Ny fandaniana sy ny sara hafa ankoatra ny saram-pandraharahana momba ny fisorohana, mifandraika amin'ny fanelanelanana dia hozaraina mitovy amintsika tsirairay.
Raha toa ka manaporofo fa tsy ho tonga amin'ny vahaolana mahafa-po amin'ny alàlan'ny fanelanelanana, dia manaiky ny hanaiky ny fifandirana amin'ny fifehezana ny fitsaboana amin'ny toerana manaraka: London UK. Ny fitsarana amin'ny loka navoakan'ny arbitral dia afaka miditra ao amin'ny fitsarana rehetra miaraka amin'ny fahefana hanao izany.
Raha toa ny fepetra mifanaraka amin'ity fifanarahana ity dia tsy manan-kery na tsy azo tratrarina na manontolo, dia tsy hisy fiantraikany amin'izany ny fepetra sisa amin'ity fifanarahana ity.
Raha manana fanontaniana momba ireo fepetra sy fepetra mifandray ianao;